Oduu Cabsaa! Eegdota Masaraa Mootummaa fi Republican Guards keessaa 62 miliquun dhagahame. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Cabsaa! Eegdota Masaraa Mootummaa fi Republican Guards keessaa 62 miliquun dhagahame.
Oduu Cabsaa !Eegdota Masaraa Mootummaa fi Republican Guards keessaa 62 miliquun dhagahame.
Olaantummaan sirnaa fi saba tokkoo hammaachaa wayita dhufee fi tikni Eertiraa Masaraa dhuunfachuun eegdota irratti hacuuccaa guddaan taasifame. Eegdotni Masaraa fi Republican Guards kanneen biyyoota garaa garaatti leeniifamaa turan sirnicha hin tajaajillu jechuun hojii dhiisanii badanii jiru. Armaan dura eegdotni hedduun hidhamanii jiraachuunis ni beekama.
Faddala tokkotu magaalaa Sabbataa, Alamganaa fi naannoo ishee keessatti mana,lafa gurgura. Namni kun hordoftoota fb hedduu nama qabu dha. Dargaggoota Oromoo faddaalummaa (daallalaa) irrattin isin ijaara jedhee bilbila irraa funaanaa bahe. Dabarsee teessoo isaanii PPf kenne. PPnis hojii seentu jettee xiqqoo leenjifattee gara Qajeelaafaa dabarfatte. Daallalaan jalqabaa sun ABO Hilton keessatti miseensa Gumii Sabaa taheera. Kanneen biroos filamaniiru. Kan qubee barreessuu dandeessi jedhamte shamarri tokkos Gumii Sabaa ABO Hilton taateetti. Jarana amma yeroo kana dubbistan eenyu akka taatan of beektu. Maquma keessan gad yaasnamoo keessaa of yaastu? Filadhaa!
GUMII SABAA FADDAALAA
Araara Gaanfa Afrikaa fi Deemsa Itoophiyaa irraan gadee
Walitti bu’insa daangaa fi hulaa Garba Hindii irratti walitti bu’aa kan turan Keeniyaa fi Somaaliyaan walii galteedhaan furuuf murteessan. Akka Odeessi bahe mirkaneessittu,Keeniyaan hulaa waldhabdee kanaa Somaaliyaaf ni dhiisti. Kun aggaammii Alshabab yeroo baayyee Keeniyaa irratti taasifamu hir’isuun Alshabaab humna guutuun Itoophiyaa irratti akka xiyyeeffatu taasisa
PP Oromiyaaf qajeelfamni haaraan Abiy Ahmed irraa kennameera. Hoogganaan PP Oromiyaa hojiitti hiikuuf karoora baasaa jira. Olola aangawoota PP gananii fi ABO, KFO irratti gaggeeffamu dha.